‘ब्याड टच’ प्रकरण : ‘कबड्डी–४’ को व्यापारमा कति भयो घाटा ? – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured ‘ब्याड टच’ प्रकरण : ‘कबड्डी–४’ को व्यापारमा कति भयो घाटा ?
‘ब्याड टच’ प्रकरण : ‘कबड्डी–४’ को व्यापारमा कति भयो घाटा ?
काठमाडौं : चलचित्र ‘कबड्डी–४’ चलिरहेका बेला नायिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाले ठूलो चर्चा पायो । घटना चलचित्र निर्माण टिम र दुर्व्यवहार गरेका भनिएका व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहेन । चलचित्रकी नायिका मिरुना मगर दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रहरीसमक्ष पुगिन् । प्रहरीले आरोपी फुर्पा लामालाई आइतबार पक्राउ समेत गर्‍यो ।
घटनास्थलमा फुर्पाले माफी मागे पनि उनलाई जबरजस्ती आरोप लगाइएको भन्दै नायिका र कबड्डी टिमप्रति लामा समुदायले आपत्ति जनायो । आपत्ति मात्र होइन, लामा समुदाय आन्दोलनमा उत्रियो । उनीहरू सिनेमा हल र चलचित्र विकास बोर्ड घेराउ गर्न पुगे । सिनेमा बहिष्कार गर्ने भन्दै फिल्मको पोस्टर समेत जलाए ।
घटना भएको सिभिल महलको सीसीटीभी फुटेजमा लामाले नायिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको प्रष्ट नेदेखिएपछि विरोधको स्वर झन्–झन् चर्किरहेको थियो । त्यही समय ९मंगलबार० फुर्पा प्रहरी हिरासतबाट रिहा भए ।
त्यसपछि नायिका मिरुनासँगै चलचित्र निर्माण पक्ष सहमतिको प्रयासमा जुट्यो । अन्ततः दुवै पक्षले एकार्कालाई माफी दिँदै सहमति गरे । एकार्कालाई माफी दिएको हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति जारी गरे ।
लामो समुदायको प्रदर्शनले चलचित्रलाई ठूलो असर गर्‍यो । मंगलबार केएल टावर र बालाजुका हलबाहिर भएको विरोध प्रदर्शनले शो ‘क्यान्सिल’ भयो ।
उक्त प्रदर्शनले चलचित्र निर्माण पक्षलाई कति क्षति भयो रु चलचित्र वितरकले खासै ठूलो असर नगरेको दाबी गरे पनि ‘ब्याड टच’ घटनाले निर्माण पक्षलाई ठूलै घाटा लागेको स्रोतको भनाइ छ । हाउसफुल व्यापार भइरहेका बेला भएको यो घटनाको मारमा निर्माण पक्ष परेको स्रोत बताउँछ ।
“न्यूनतम एक करोड रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन विरोधका कारण शो क्यान्सिल हुँदा हुन सकेन । शो क्यान्सिल हुनु र सिनेमा प्रदर्शन गर्न दिँदैनौँ भन्दै हलबाहिर प्रदर्शन हुँदा डरले पनि कति दर्शक आउनु भएन,” स्रोत भन्छ, “यो घटनाले एक करोड कलेक्सन कम हुनु भनेको निर्मातालाई हातमा पर्ने करिब ४५ लाख रुपैयाँ घट्नु हो ।”
कबड्डी–४ ले पाँच दिनमा १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ । यो हालसम्मकै छोटो समयमा भएको धेरै ग्रस कलेक्सन हो ।
ओपनिङ डेज हाउसफुल व्यापार गरेको चलचित्रले चार दिनमै १० करोडको आँकडा पार गरेको हो । चार दिनमा १० करोड ग्रस कलेक्सन गर्ने कबड्डी–४ नेपालमा नै पहिलो चलचित्र हो । “चलचित्रले अहिले पनि उत्साहजनक रूपमा व्यापार गरिरहेको छ,” वितरक गोविन्द शाही भन्छन् ।
यो चलचित्रले क्यूएफएक्स चेनमा मात्रै ९८ शो पाएको थियो । यसअघि, सबैभन्दा धेरै शो पाउने चलचित्र ‘केजीएफ च्याप्टर–२’ थियो । जसले ८० शो पाएको थियो । रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको चलचित्रमा दयाहाङ राई, मिरुना मगर, सौगात मल्ल, बुद्दि तामाङ, विजय बराललगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।